Ireo mpampiasa mazoto ny Pokémon Go dia latsaka tamin'ny 80% | Vaovao momba ny gadget
Ny fanombohana ny Pokémon Go amin'ity fahavaratra ity dia tena revolisiona iray ao anatin'ny tontolon'ny finday ary koa lalao video. Ka ny tsena amin'ny kojakoja sasany toa bateria mpanampy nitombo be taorian'ny nanombohan'ny Pokémon Go.
Saingy, amin'izao fotoana izao dia toa tsy mandalo ny fotoanany tsara indrindra ny lalao video. Taorian'ny resabe momba ny fanavaozana farany, tatitra maro no manondro fa amin'izao fotoana izao ny lalao video dia very hatramin'ny 80% amin'ireo mpampiasa mavitrika, mpampiasa izay tsy nilalao sy nanaparitaka ny fampiasana ny lalao video ihany fa nampiasa ihany koa ny fividianana lalao video, ny tena vola miditra amin'ny Niantic.
Mbola mijanona amin'ny 20% n'ny mpampiasa, Pokémon Go dia mbola mahasoa ihany ary ny fidiram-bolany dia mitohy mandresy ny lalao video Candy Crush, lalao video mahasoa indrindra teo amin'ny tantara hatreto.
Ireo mpampiasa Pokémon Go dia tsy mijery tsara ireo fanavaozana ny lalao video farany
Ny hoavin'ny Pokémon Go dia tsy dia mena-mena raha tsy nanao na inona na inona momba izany i Niantic. Amin'ny lafiny iray, mpampiasa maro no tsy faly amin'ny fanidiana kaonty tsy misy fanavakavahana na ny fampiasana fomba hafa. Betsaka koa no mahita an'izany tsy mahafeno ny fitakian'ny mpilalao ny fanavaozana satria mbola tsy navotsotra ny pokemon rehetra ary maro ny hafa maniry ny ho afaka hisambotra pokémon vaovao niseho tamin'ny lalao video taorian'ny Pokémon Red. Ny azo antenaina hitafy, Pokémon Go Plus mbola tsy misy ihany koa ary na dia toa ho tonga aza izy io dia maro ireo mpampiasa no nanantena azy hatramin'ny voalohany. Tsy manana ady misy eo amin'ny mpilalao na ny fifanakalozana Pokémon ihany koa isika, zavatra antenain'ny maro.
Na izany na tsy izany Niantic dia mbola manana toerana hanaovana hetsika ary mbola azonao atao ihany ny mampiditra ireo mpampiasa very rehetra ireo hanatevin-daharana kokoa hilalao ilay lalao video malaza amin'ny findainao, na tsia Inona ny hevitrao? Heverinao ve fa hampitombo ny isan'ny mpampiasa mavitrika ny fanavaozana Pokémon Go amin'ny ho avy?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny gadget » an-trano » Videogames » Ireo mpampiasa Pokémon Go mihetsika dia latsaka hatramin'ny 80%
Niantic dia tsy mihaino ireo mpilalao ary amin'ny farany dia mampitsangam-bolo. Mandeha amin'izay heverin'izy ireo fa ny hafainganan'izy ireo heveriko ho fandraharahana.
Ny Galaxy Note 7 dia hamidy indray any Etazonia amin'ny 21 septambra